Illinka Wadaagga Internet Essentials
Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials
Hadda Kafiil Noqo
Maaliyadda Xiriirsanaanta Degdegta
Comcast waxay isku la weyn tahay inay kaalmayso kuwii codsaday ECF. Codsadayaasha u qalma ee danaynaaya inay u shaqeeyaan Comcast si ay u helaan adeegga intarneedka ee xawliga sarreeya iyagoo matalaaya arday, shaqaalaha dugsi, iyo madax makatabadeed iyagoo adeegsanaaya ECf waxay sidaas ku samayn karaan Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials (IEPP) aan annagu maragga ka nahay.
Annagoo kaashanaynna IEPP, waxaan u dedajinaynnaa hawsha dhinacyada u qalma si ay u adeegsadaan ECF si markaas si degdeg ah ay dadka u baahani xiriirin ballaaran oo Internet Essentials-ka Comcast ah ugu helaan guryahooda. Dugsiyada danaynaaya iyo maktabaduhu waxay xog dheeri ah ka heli karaan oo ka codsan karaa ECF emergencyconnectivityfund.org.
Kafiillada waxaa laga yaabaa inay kala doortaan 2 xulashooyina koox-xawliyeed si u kaalmeeyaan qoysaskooda kafaala qaaday.
La shaqee Comcast
Sannadihii 10, annagu aan ku xiriinnaynay in ka badan 10 milyan dakhli-hooseeyaal Maraykana Intarneed gurigooda. Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials (IEPP) waxaa si gooniya loogu talagalay inuu kaalmeeyo barnaamijka ECF.
Halkaan guji si aad noola shaqayso. Kooxdayadu waxay u taagan tahay kaalmayn aan go'nay waxaanna kuugu soo gaari doonnaa 72 saacadood gudahooda.
Talaado, Bisha 7aad 27 waxaan u qabanaynnaa dood-mareeg xagga xogta wadaaga-yaashayada si wax looga sii barta ECF iyo lashaqaynta Comcast. Haddii aad awoodin inaad si nool noogu soo biirto, oo aad doonayso inaad fiiriso dood-mareegeedka mar kale, ama aad doonayso inaad kala qaybgasho jawaabta asaaggaa ama asaxaabta - fadlan daawo halkaan.
Dheeri ka baro Internet Essentials
qoysaska la Kafiishay
Foomkaan buuxi haddii aad jeceshahay in laguu tixgaliyo inaad noqoto kafiil
Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials maahan kaliya inuu ka shaqeeyo gaarsiinta Intarneedka qoysaska ugu dayacnaan badan, ee wuxuu kaloo u oggolaanayaa wadaagayaasha furaha ah inay khibraddooda keenaan qoysaska u awood siiyaan si ay uga lib keenaan loollamada maanta iyo inay diyaar noqdaan mustaqbalka.
Ku soo biir boqollaalka urur ee wax la wadaagay Comcas si loo awoodo qeybin gododeed iyo waxtarka waxbarasho fogaaneedka ardayda.
ururrada danaynaaya inay noqdaan wadaagayaasha IEPP ama kuwa jecel inay wadaage ka la noqdaan Comcast dhanka Maaliyadda Xiriirsanaanta Degdegta waxay buuxin karaan foomkaan si ay u helaan xog dheeri ah ama si ay u bilaabaan hawshii kafaalashada. Halkaan guji
Waa maxay ECF?
Maaliyadda Xiriirsanaanta Degdegta (ECF) ee FCC waa $7.17 bilyan oo barnaamij xukuumadeeda si loo caawiyo dugsiyada oo maktabaduhu u bixiyaan aalado iyo adeegyo looga baahan yahay waxbarasho fogaaneedka inta lagu jiro COVID-19 muddada degdegta. Dugsiyada iyo maktabadaha u qalma, barnaamijka ECF waxaa laga dabooli doonaa qarashyada loo-qaateenka:
(1) Xiriirsanaanta intarneedka ee ardayda, shaqaalaha dugsiga, iyo shaqaalaha maktabadda ee meelaha aan ahayn dugsiyada ama maktabadaha;
(2) qalabka sida barokululka WiFi, moodeemmada, iyo rootariska; iyo
(3) laptop iyo kombuyuutarro miiseedka.
Comcast waxay isku la weyn tahay inay kaalmayso kuwii codsaday ECF. Codsadayaasha u qalma ee danaynaaya inay u shaqeeyaan Comcast si ay u helaan adeegga intarneedka ee xawliga sarreeya iyagoo matalaaya arday, shaqaalaha dugsi, iyo madax makatabadeed iyagoo adeegsanaaya ECf waxay sidaas ku samayn karaan Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials (IEPP) aan annagu maragga ka nahay. Ka-faa'iidaysiga IEPP, waxaan nahay kuwo u fududaynaaya dhinacyada u qalma inay raadsadaan maaliyadda iyo xiriirinta degdegta dadka baahida u qaba inay gurigooda si ballaaran ugu helaan Internet Essentials-ka Comcast.
Sidee baan u codsan karaa ECF ama u aqoon karaa haddii aan u qalmo?
Daaqadda buuxinta codsiga bilawga waxaa la furi doonaa Bisha 6-aad 29, 2021, waxaana la xiri doonaa Bisha 8-aad August 13, 2021. Inta lagu jiro waqtigaan, dhinacyada u qalmaa waxay u gudbin karaa codsiyada maaliyadda FCC si qarashka adeegyada ay u qalmeen, qalabka, iyo aaladaha looga daboolo inta u dhaxeysa Bisha 7-aad 1, 2021 iyo Bisha 6-aad 30, 2022. Codsadayaashu waa inay caddeeyaan haddii ay qaansheegyada soo gudbin doonaan ama haddii bixiyaha adeeggu uu oggolaaday inuu ku soo gudbiyo qaansheegyada magacyadooda. Shirkad Agaasimeedka Adeegga Caalamiga (USAC) waa agaasimaha barnaamijka ECF wuxuuna eegi doonaa codsiyada wuxuuna soo saari doonaa warqadaha go'aanka ee go'aan-qaadashada maaliyadda (FCDL) ee ururrada la ansixiyay. Kadib helitaanka FCDL, ururrada la ansixiyay waxaa laga yaabaa inay u gudbiyaan codsiyada lacag-soocelinta USAC. Daaqadda buuxinta ee labaad waxaa laga yaabaa in loo furo iibsashooyinka lafilaanka ah ama iibsashooyinka dibu-eegista haddii aan maaliyadaha oo dhan lagu wada adeegsan daaqadda buuxinta kowaad. Dugsiyada danaynaaya iyo maktabadaha waxay xog dheeri ah ka heli karaan oo ka codsan karaan EmergencyConnectivityFund.
Ma inaan ECF helaa baa si aan u noqdo kafiilka IEPP?
Maya, urur kasta wuxuu noqon karaa kafiil. Si kastaba ha ahaatee, kaliya dugsiyada iyo maktabadaha waxay ka qeyb geli karaan ECF.
Waa maxay xogta aan u baahanahay si aan noqdo kafiilka IEPP anigoo adeegsanaaya ECF?
Wadaagayaasha danaynaaya inay la galaan heshiiska Barnaamijka Wadaagidda Internet Essentials Comcast si ay saameeyaan ECF waa inay guji halkaan si ay xogtooda u keenaan oo codsiga u gudbiyaan. Wadaagayaasha waxaa laga yaabaa oo kale inay ku xiriirsamaan wakiilka ama iimaylka IEPP_Support@Comcast.com iyagoo wata xogtooda iyo faahfaahinnada wadaagista. Booqo InternetEssentials.com/Spons ama dheeri ka baro habka hoos ku taxan.
1. Ku geli Comcast sidii bixiyaha Codsiga ECF iyadoo la adeegsnaaya Comcast Cable Communications, LLC SPIN#: 143013564. Codsiga ECF waxaa laga heli karaa EmergencyConnectivityFund.
2. Comcast iyo wadaaguhu waxay oggolaanayaan Qodobbada Barnaamijka Wadaagnimada iyo Shuruudaha,
3. Gaaritaanka qoysasku waxay bilaabmayaan oo afgaradyada koruqaadista la qaybinayaa,
4. Kafiilku wuxuu helayaa qaansheeg bille ah oo loo la jeedo qoys walba oo la kafiishay oo xiriirsamay.
Sidee buu heshiiska Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials (IEPP) u shaqeeyaa?
Wadaagayaasha, sida dugsiyada, kuwa daryeelka caafimaadka bixiya, iyo ururrada ku salaysan-bulshada ee kale, waxay awood u leeyihiin kafaalad, ama inay lacag ku bixiyaan, adeegga Internet Essentials iyadoo laga bixinaayo xubnahaooda/qoysaskooda ttaas oo dhan $9.95 + canshuur bishii qoyskiiba. Shuruudaha ugu yar si loo sameeyo heshiiska IEPP waa ugu yaraan lix-bilood oo kafaalaa oo ugu yaraan loo sameeyo25 codsadayaasha ui qalma ee ku cusub barnaamijka.
Waxaa ku xiga heshiiska rasmiga Comcast oo u diri doonta kafiillada "afgaradyada koruqaadista" si loogu qaybiyo qoysaska u qalma. Afgaradyadaan waxay xaqiijin doonaan in qaamaynta codsadaha la ansixiyay la daba geli doono ilaa xisaabta kafiilka. Kafiilladu waxay bil walba lheli doonaan hal qaansheeg waxaana kaliya lagu dallacayaa codsadayaasha la ansixiyay oo ku xiriirsamay barnaamijka Internet Essentials.
Sidee bay qoysasku uga faa'iidaysanayaan IEPP?
Wadaagayaasha danaynaaya Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials waa iany foomkaan buuxiyaan waxaana ku la soo xiriiri doona wakiilkaaga Comcast. Fadlan diyaarso xogtaada iyo tafatirrada wadaagnimada si habka hoos ku qoran loo bilaabo.
Tafatirrada Wadaagnimada keen:
Tirada xisaabaha la kafiishay (25 ama ka badan baa la iska rabaa)
Shardiga wadaagnimada (6-shardi bileed ama dheeraad baa la iska rabaa)
Afgaradyada aagga ee dhammaan qorysaska la rabo in la kafiisho
Barta ugu weyn ee xiriirka (magac, lambar taleefan, iimayl)
Waa inaad oggolaataa Sharciga Barnaamijka Wadaagga iyo Sharuudaha:
Comcast waxay ugu soo diri doontaa qoraalka heshiiska xaashi ku habaysan Microsoft Word kafiillada si ay u eegaan ama u baddalaan (haddii loo baahdo) iyagoo adeegsanaaya Raad Geddiyaasha
Qoraalladii dib loogu noqday waxaa eegi doona qeybta sharciga ee Comcast-markii la gabagabeeyana, waxaa kafiilka laga rabaa inuu Comcast u diro PDF-kii oo saxiixan
Waxaad u qaybisaa Afgaradyada Koruqaadista codsadayaasha u qalma:
Comcast waxay soo saari doontaa afgaradyo koruqaadis hal-mar adeegsi ah oo gooniya si loogu qaybiyo dadka ama qoysaska u qalma
Ururradu ma adeegsan karaan lacagaha xantaynta ee CARES Act si ay lacag ugu bixiyaan heshiisyadaan?
Haa, arrimaha qaarkood, degmooyin dugsiyeed, kuwa daryeelka caafimaadka bixiya, iyo ururro kalaba waxay ka heleen maalgelinta dawladda CARES Act taas oo ay u adeegsanayaan si ay u kafiishaan adeegga qoysaska dakhliga-hooseeya. Arrimaha qaarkood, maalgelinta gaarka loo leeyahay iyo tan guud labadoo wada jira waa la adeegsaday. Dhab ahaantii waxay ku xiran tahay degmo dugsiyeedka aagga ama ururka.
Heshiiyada Adeegga ee la kafiishay ma waxay kali u yihiin ardayda? Ka warran barayaasha ama maamullada dugsiga?
Ilaa hadda, heshiisyada IEPP-da kaliya waxaan loo habeeyay qoysaska u qalma Internet Essentials, kuwaas oo ah barnaamijyo ku foogan-dugsiga, oo loon la jeedo qoysaska ardayga. Haddii bare ama aqalka maamule dugsi u qalma Internet Essentials, oo uu ururka kafaalashadu oggolaado inuu bixiyo qarashka adeeggooda, iyaguna waxay kamid noqon karaan heshiiska IEPP.
Waxaan kaloo haynnaa barnaamijka "Xfinity ee Barayaasha" oo diyaarsan. Waxaan u soo ban dhignaa $150 Kaar fiisa oo hadiyada barayaasha raba inay is qoraan adeegga Intarneedka Xfinity. Barnaamij-kayaga Xfinity ee Barayaashu loogu ma talagelin maamulayasha dugsiga, laakiin waxaan sii wadi doonnaa qiimeynteeda.
Muddo intee le'eg bay hawshu qaadanaysaa?
Hawsha qorshe-hawleedkeedu waa kala duwan yahay wuxuuna ku xiran yahay waqtiga uu qaadanaaya heshiiska dhammaystirkiisu iyo inta tafatirrada wadaagga la isku dubba ridaayo. Fadlan si dhaw u la shaqee wakiilkaaga Comcast si mashruucaagu sida ugu dhoqso badan ugu fulo.
Muddo intee le'eg bay heshiisyadaan IEPP socon doonaan?
Sida caadiga, heshiisyadaan waxay jiri doonaan lix ama laba iyo toban bilood, laakiin waxay kaloo jiri karaan sannado badan. Waxaan u dabacsanaan doonnaa si aan isugu daynno inaan hananno qodobbada hawsha ee urur walba oo kafiilanaaya.
Labad-bilood oo lacag-la'aanta ee la soo ban dhigay ma u diyaarssan yihiin IEPP?
Haa, waxaan ku xushmaynnaa 2-bilood oo lacag-la'aanta IE-gayagaPP heshiisyo. Middaan waxaa loogu talagalay macaamiisha cusub oo ah kuwii isu qoray adeegga Internet Essentials ugu dambayn Bishii 6-aad 30, 2022.
Ilaa hadda imisa dugsi baa isu diiwaan galiyay heshiiska IEPP?
Waxaan haynnaa in ka badan 70 ilaa hadda inta saxiixday heshiisyada oo laga helay inay danaynayaan waa badan yihiin, qaar kaloo badan.
Dhaafintaanka 90-maalintii ma lagu dhaqayaa?
Macaamiishu haddeer ku ma darsan karaan adeegga intarneedka Xfinity ama waxay ku darsadeen90 maalmood ee la soo dhaafay*. Hadda waxaan dhaafaynnaa dhammaan deymankii horee la iska rabay ilaa Bisha 6-aad 30, 2022, si markaas xubno badan isu qoraan oo u helaan xiriirin.
*Shardigaan lagu ma dhaqaayo macaamiisha Internet Essentials kuwaas laga yaabo inay u qalmaan IEPP.
Halkaan guji xog badan oo ku saabsan u-qalmashada.
Comcast ma waxay soo ban dhigtaa shaandhaynta adeegga Internet Essentials?
Iyadoo Comcast ay soo ban dhigto xakamaynno waalideedka, kuwaan waa inuu habeeyaa qof qoysaska. Macaamiisha Internet Essentials waxay hadda heli karaan app-ka xFi ee Comcast halkaas oo ka habayn karaan xakamaynno waalideecdka, arag aaladaha ku xiriirsan xayndaabka guriga, oo ka haki WiFi-ga aalad mid kasta ha ahaadee ama tilmaamaha kale, ka astaamee.
Miyuu jiraa Qaddar la tixgelinaayo oo Qaddar-E ah kaas oo ay tahay in dugsiyadu ka war qabaan kahor saxiixitaanka heshiiska IEPP?
Waqtigaan maaha, xeerarka Qaddar-E lagu ma dhaqaayo maalgelinta taas oo aan hadda ka soo jeedin Qaddar-E. Hadda, Qaddar-E loo ma isticmaali karo si lacag loogu bixiyo adeegga hirka ballaan ee guriga.
Waa maxay khidmadaha caymiska, qarashyada adeegga, ama qalabka aan la soo celin - yaa kuwaan bixinaaya?
Adeegsadaha/kudarsadaha dhammaadka baa ugu dambaynta mas'uul ka ah khidmadaha cayminta ee qorshaha xogta la xiriira, iyo tan qalabkaan la soo celin.
Laga bilaabo Bisha 7-aad29, 2020, Macaamiisha Internet Essentials ma heli doonaan rakibaad xirfadeed ama guriga kutuuris xulasho ahaan si ay u yagleelaan adeeggooda intarneedkooda ee Internet Essentials. Dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwa adeeggooda gudbiska yahay waxaa la siin doonaa xirmada Iskaa-u-Rakibidda oo lacag-la'aana oo wata tiimaamo si ay uga shaqaysiiyaan Gateway-gooda iyagoo maraaya app-ka xFi. Cinwaannada aan u qalmayn Iskaa-ku-rakibidda sababtoo ah arrimo ka jira bannaanka guriga xiriirinta waxay heli doonaan adeegga guri-kutuurista ama rakibaad taageer (waxay ku xiran tahay goobtooda) iyadoon uusan wehelin wax qarasha oo dheeri ah.
Haddii macmiilku daaha ka qaaday in curyaannimo ka hor istaagtay rakibaadda Gateway-gooda cusub iyo adeegga intarneedka, waxaa loo wareejin doonaa Xarunta Gaaritaanka ee Wacnaanta (xurunta wicitaanka), halkaas oo rakibaad xirfadeed buuxda loo ballamin doono iyadoo uusan wax qarash dheeri ah la socon. Haddii uusan macmiilku wali doonayn inuu isku dayo iskaa-ku-rakibidda, wuxuu wakiilku u soo ban dhigi karaa xulashoooyin qofeed* uusan macmiilka ula socon wax qarash dheeri ah.
*Xulashooyinka diyaarsan iyo qarashyadu way ku kala duwan yihiin meelaha
Ma waxaa jira sicir-jabinno ka badan 25 xisaabihii la kafiishay?
Ma jiraan xisaabo dheeri ah oo loogu talagalay tiro ballaaran oo xisaabo ah.
Kombulyuutarrada sicirka jaban ma lagu aruurin karaa Heshiiska Barnaamijka Wadaagga?
Dalabyada kombuyuutarrada ee baaxadda leh wax xiriir ah la ma laha Barnaamijka Internet Essentials. Fadlan la shaqee wakiilkaaga Comcast haddii aad doonayso inaad kombuyuutarro dalbato. Dadka macaamiisha waxay dalban karaan kombuyuutarro sicir jaban waqti kasta iyagoo booqanaaya InternetEssentials.com/low-cost-computer.
Barnaamijka Wadaagga ee Comcast Internet Essentials (IEPP) wuxuu ku shaqeeyaa heshiis dhex maray ururka kafaalanaaya iyo Comcast, iyadoo loo oggolaanaayo ururka kafaalanaaya inuu ka bixiyo lacagta adeegga macaamiisha la doortay.
Marka la meeleeyo heshiiska, "afgaradyada koruqaadista" ayaa waxaa abuura Comcast, taas kadib oo uu kafiilku u qeybin karo qoysaska Qoysaska U qalma iyo qofafka ay xushmaynayaan. Afgaradyada koruqaadista waxaa adeegsada Comcast si ay toos ugu qaameyso kafiilka adeegga macaamiisha Internet Essentials.
Sidee baan uga faa'iidaysan karaa Adeegga la Kafiishay (IEPP)?
Ka-codsashada Internet Essentials waxay ku fududdahay oo ku dhqoso badan tahay taleefanka gacanta. Codsadayaashu waxay booqan karaan InternetEssentials.com si loogu hago habka onlaynka. Codsadayaashu waxay u baahan doonaan inay geliyaan afgaradka koruqaadista ee uu bixiyo kafiilku si ay u helaan adeeg kafiishay. Haddii kafiilku yahay dugsi, codsadayaashu waxay ka loo u baahan yihiin inay doortaan inay dugsiga carruur u dhigato iyo iyagoo qoraaya dugsiga magaciisa marka ay ka soo hoos baxdo Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka.
Ururkayga baa i siiyay afgaradka koruqaadista/laygu aqoonsado inaan leeyahay adeeg uu kafiishay (iEPP) laakiin u ma qalmo, sabab?
Dhammaan shuruudaha u-qamashada barnaamijka Internet Essentials wali waa lagu dhaqayaa IEPP. Macaamiishu waa inay ku nooshahay aaggayaga adeegga waana inaysan ku darsan adeegga Intarneedka Xfinity oo kale ama aysan ku darsan 90maalmood ee la soo dhaafay.
Hadda, waxaan dhaafaynnaa dhammaan lacagihii daynta ahaa ee dib loo bixin lahaa dhammaadka sannadka, si markaas kudarsadayaal dheeri isu qoraan oo u xariirsamaan. Click halkaan si loo helo xog dheeri ah oo ku saabsan u qalmashada.
Miyaan la ii soo diri doonaa qaansheeg inta lagu jiro waqtiga adeeggayga la kafiishay?
Haa, waxaad heli doontaa qaansheegta Xfinity ee halbeegga. $9.95 qarashka ay ku soo dallaco Internet Essentials waa la qorayaa laakin dib dambaa kafiilku karadhid ahaan u bixin doonaa, sidaas awgeed dallaacaadda adeegga Internet Essentials wuxuu ahaan doonaa $0. Haddii aad hayso adeegyo dheeri ah ama khidmado laga soo dallacay Comcast, kuwaas karadhid ahaan loo ma bixin doono waxaana laguu tusi doonaa sidii lacag la iska rabo.
Degmo dugsiyeedka magaaladaydu wuxuu haystaa heshiiska IEPP ee Comcast, maxaan u heli waayay afgaradka koruqaadista?
IEPP heshiiska ka dhaxeeya ururka kafaaladda iyo Comcast, miyuu u oggolaanaya kafiilka inuu lacagta ka bixiyo macaamiisha la xulay. Haddii aad heli waydo afgaradka koruqaadista, waxaa ku talinaynnaa in laxiriirid samayso kaagii/taadii magaalo, dagmo dugsiyeedka, ama goobaaya xog dheeri ah oo raba inay arkaan haddii aad u qalanto adeegga la kafiishay ama sidii aad u heli lahayd afgaradka koruqaadista.
Marka heshiiska IEPP dhammaado, maxaa ku dhacaaya adeegga intarneedka macaamiisha?
Haddii ururka kafiilka ah uusan doonayn inuu dheereeyo waqtigii heshiiska ee asalka ahaa, waxaan la xiriiri doonnaa maacaamiisha sii ahaanaaya kuwo u qalma Internet Essentials kuwas oo ay tahay ama inay bilaabeen lacag-bixin $9.95/bishii canshuur lagu daray si adeeggoodii u sii socdo ama inay xisaabahooda xiraan oo ku noqdaan moodamkii xarigga.
Miyay Comcast soo ban dhigtaa rakibitaan xirfadaysan?
Maya. Laga bilaabo Bisha 7-aad 29, 2020, Macaamiisha Internet Essentials u ma heli doonaan rakibaad xirfadeed ama Guri Kutuuris xulasho si ay u rakibtaan adeeggooda Internet Essentials. Dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwa adeeggooda gudbiska yahay waxaa la siin doonaa xirmada Iskaa-u-Rakibidda oo lacag-la'aana oo wata tiimaamo si ay uga shaqaysiiyaan Gateway-gooda iyagoo maraaya app-ka xFi. Cinwaannada aan u qalmayn Iskaa-ku-rakibidda sababtoo ah arrimo ka jira bannaanka guriga xiriirinta waxay heli doonaan adeegga guri-kutuurista ama rakibaad taageer (waxay ku xiran tahay goobtooda) iyadoon uusan wehelin wax qarasha oo dheeri ah.
Rakibaad xirfadeedka ma waxaa la socda khidmad haddii aan ku dhibtooda habaynta adeegga anigoo adeegsanaaya Xirmadii Iskaa-U-Rakibiddii aniga la ii soo diray?
Maya. Ilaa inta aad isku dayayso inaad adigu adeegga yagleelato, khidmad kugu ma soo dallaci doonno haddii aad u baahan tahay farsamo-yaqaan kaa caawiya hawsha rakibaadda.
IEPP ma waxay kaliya u gooni u tahay Internet Essentials ama ma waxay la socotaa intarneedka Xfinity?
Waqtiga hadda, IEPP waxaa kali u leh barnaamijka Internet Essentials. Waxaan sahaminaynnaa xulashooyin dheeri ah si aan u hananno baahiyaha kafiilladayada kala duwan.
Sidee buu Qorshaha Adeegsiga Xogta Intarneedka Xfinity u shaqeeyaa?
Ilaa inta uu socdo 2021, waxaan bixin doonnaa xog aan xad lahayn oo aan wax qarasha ugu fadhiyin macaamiishayada dakhligu hooseeyo oo la kulmaaya dhibab xooggan oo xagga dhaqaalaha inta lagu jiro waqtiga adag, kuwaas oo ama qeyb ka ah barnaamijkayaga Internet Essentials ee Barnaamijka Wadaagga.
Si aad u aragto adeegsigaaga dhabta, xisaabtayda ka gal:https://www.xfinity.com/mobile/my-account.